आजदेखी अमेरिकाको डिभी खुल्दै, फर्म भर्दा के के चाहिन्छ ? – ताजा समाचार
आजदेखी अमेरिकाको डिभी खुल्दै, फर्म भर्दा के के चाहिन्छ ?
आज बुधबारदेखी आगामी बर्ष सन् २०२१ का लागि डिभी लोटरी खुलेको छ । आज अक्टोबर २ देखि डिभी भर्न चाहानेहरुले आनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । अक्टोबर २ तारिख न्युयोर्क समय अनुसार दिउँसो १२ बजेदेखि नोभेम्बर ५ दिउँसो १२ बजेसम्म डिभी लोटरी भर्न सकिने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।